Yonke into ofuna ukuyifumana malunga nepeyinti ye-thermal | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Ngokuqinisekileyo wakhe wacinga malunga nendlela yokunceda ukuphucula ubushushu bekhaya lakho ngaphandle kokwenza nayiphi na imisebenzi. Kubalulekile ukugcina iindonga zigqunyiwe ukuze kuqinisekiswe ubushushu namandla esiwasebenzisayo kwimeko yekhaya. Olu hlobo lweemeko, luyiliwe ipeyinti eshushu. Yinto entsha yetekhnoloji esinceda ukuba sonyuse ubushushu kumbulelo ongaphezulu komhlaba kwiipropathi zayo.
Ukuba ufuna ukwazi zonke iipropathi kunye nokuba ipeyinti ye-thermal isebenza njani, qhubeka ufunda 🙂
1 Iimpawu zepeyinti ezishushu
2 Iimpawu ezizodwa
3 Inokusetyenziswa phi?
4 Isebenza njani ipeyinti eshushu?
5 Ixabiso elingakanani?
Iimpawu zepeyinti ezishushu
Yinto yenguqu kwihlabathi lokugquma kunye nokonga umbane. Ngaphandle kokutshintsha uhlobo lwezinto ezenziwe ngodonga, sinokonyusa ubushushu. Ikhaya elikhuselekileyo linokusinceda sizikhusele kutshintsho lobushushu phakathi kwendlu nangaphandle. Ngale ndlela asikhathazwa bubusika obubandayo okanye amaqondo obushushu aphezulu ehlotyeni. Isetyenziselwa ukugcina ubushushu obuzinzileyo ngaphakathi.
Ukongeza, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba Ukugquma kakuhle kweendonga kunye neefestile kuya konga amandla. Xa kubanda kakhulu okanye kushushu kakhulu sisebenzisa izixhobo zombane ezinje ngokufudumeza kunye nomoya opholileyo. Zombini zonyusa kakhulu ukusetyenziswa kombane ekhaya. Asizukugcina kuphela kwityala lombane ngepeyinti eshushu, kodwa sizakunciphisa nongcoliseko.
Ekubunjweni sifumana ii-microspheres zeceramic ezenza ngokudala igumbi lomoya. Eli gumbi lomoya linoxanduva lokophula iibhlorho ezikhoyo kwaye zisinceda ukuba sizihlukanise nabantu ngaphandle. Nangona umbala wepeyinti umhlophe ngokubanzi, kamva unokupeyintwa ngolunye uluhlu lwepeyinti eqhelekileyo ngaphezulu engapheli.
Kucetyiswa kakhulu ukuba ufake isicelo Iidyasi ezi-2-3 zepeyinti eshushu yokugquma kakuhle ngonaphakade. Ukuba sipeyinta komnye umbala okanye ngenye ipeyinti yokuhombisa, asizukuphulukana neepropathi. Oku kuyenza ibe yimveliso efanelekileyo kunye notshintsho kwimarike.
Kuzo zonke ezo ntsapho ezinamakhaya angakhuselwanga kakuhle, ezi zinto zizinto ezingcwele. Iipropathi zayo ziyamangalisa kwaye ukusebenza kwayo kuqinisekisiwe. Ngokwabiwa kakuhle kwepeyinti eshushu ecaleni kweendonga zendlu, sinokufikelela ukonga ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-40 kwimoya yomoya kunye nokufudumeza.
Kwelinye icala, ineempawu ezithintela ukubonakala kokufuma. Kuqhelekile ukufumana ukufuma kwiindonga ezindala ngenxa yokuhamba kwemibhobho. Nangona kunjalo, le peyinti ithintela ukungena kwamanzi kwiindonga, kwaye ngenxa yoko ukufuma akubonakali.
Inezinto ezichasene nokubumba, ke ngekhe sibe neengxaki ngefungus kunye neebhaktiriya. Eli nqaku lihambelana nelangaphambili. Iifungi kunye neebhaktheriya zifuna indawo yokuhlala ukuze ziphile. Ke ngoko, ngokungavumeli ukufuma ukuba kubume ezindongeni, ngekhe sibe neengxaki zolu hlobo.
Okokugqibela, le peyinti ineempawu ezizodwa ze ube lilangatye nekudodobalisa. Ayinamsebenzi ukuba sibeka umlilo kuyo ngempazamo okanye kukho ingozi yekhaya. Ipeyinti eshushu ayizukutsha phantsi kwazo naziphi na iimeko.
Yipeyinti yendalo esinceda ukuba sonyuse ubushushu bekhaya lethu ngaphandle kokunciphisa indawo yokuhlala. Ukongeza, xa siyisebenzisa sikwafumana ukuncipha kwengxolo yangaphandle.
Ipeyinti eshushu yimveliso ebhetyebhetye kakhulu. Awudingi ukuba ube yingcali kweli hlabathi ukuze ukwazi ukuyisebenzisa nakweyiphi na indawo. Indima eyidlalayo ibaluleke kakhulu kwizakhiwo ukunciphisa inkcitho kufudumezo kunye nomoya opholileyo. Ingasetyenziselwa ngaphakathi nangaphandle ukwandisa iziphumo zakho.
Le peyinti ikwimfuno ephezulu yazo zonke iintlobo zezicelo zeshishini kunye nokugcinwa. Oku kungenxa yokuxhathisa kwayo kakhulu kubushushu, ukufuma, umlilo kunye nokunganyamezeleki kwayo. Kwiindawo zemizi-mveliso kuqhelekile ukubona iindonga zikwimeko embi ngenxa yemisebenzi eyenzekayo. Nangona kunjalo, ngale peyinti, imeko elungileyo yokuhombisa kunye noluncedo lweendonga inokugcinwa. Isetyenzisiwe nophahla kunye nophahla lweepropathi zayo ezizodwa.
Isebenza njani ipeyinti eshushu?
Ngumbuzo esihlala sizibuza wona. Ingubo yepeyinti inganceda njani ukugcina kushushu okanye kubanda endlwini? Ukuba neendonga zekhaya azisebenzi kakuhle. Le peyinti, emva kokusetyenziswa kwayo kunye nokomiswa, inee-microspheres ezilungelelaniswe kakuhle kwiindawo ezininzi. Olu luhlu lwefomathi igumbi lomoya elaphula ibhulorho eshushu.
Ukuba songeza iipropathi ezinqabileyo zemathiriyeli yodongwe, sinokuthi uluhlu olubanzi lweziganeko ngemitha yelanga kwindawo epeyintiweyo "ibhuza". Ngale ndlela, ukuhanjiswa kobushushu phakathi kwendlu nangaphandle kuyancitshiswa. Iyakwazi ukwala I-90% yemitha yelanga ye-infrared ukuya kuthi ga kwi-85% yemitha yelanga.
Kwiinkampani ezahlukeneyo ezithengisa le mveliso, kuvavanyo lwenziwe ukulinganisa ukuhanjiswa kwe thermal yeepeyinti. Amaxabiso afunyenwe malunga ne-0,05 W / m K. La maxabiso afunyenwe kunye nezinye izinto zokwambathisa zakudala ezinje ngoboya bezimbiwa okanye i-polystyrene eyandisiweyo. Oku kubonisa ukusebenza ngempumelelo okukhulu kwepeyinti ye-thermal njenge-insulator.
Yintoni eyenza ukuba ikhetheke ngakumbi kukuba isebenza ngendlela enamacala amabini. Oku kuthetha ukuba iyakwazi ukubonakalisa ubushushu obuvela kumacala omabini epeyinti. Ehlotyeni iyasinceda ukunqanda ubushushu ukuba bungangeni ngaphakathi kwaye ebusika buyabugcina.
Siza kumbuzo oza kuwubuza emva kokubona ukusebenza kwawo kakuhle. Ixabiso lelitha yale peyinti lijikeleze i-euro ezingama-25. Kuxhomekeke kumenzi kunye nombala. Imhlophe ngexabiso eliphantsi, kuba inokupeyintwa komnye umbala kamva. Xa ucinga ukuba unayo isivuno esikufutshane se-0,8 kunye ne-1,0 yeelitha kwimitha nganye nganye kwaye ukuba isicelo sayo sihlala sixutywe nge-10% ngesixa samanzi, malunga ne- € 700 inokubalwa ukunyanga udonga lwe-10 x 3 m.
Ukufezekisa le ngxelo, iingubo ezimbini okanye ezintathu ezine-roller zihlala ziyimfuneko.
Njengoko ubona, le yimveliso enexabiso eliphezulu, kodwa ukusebenza kwayo nokusebenza kwayo kuqinisekisiwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Umzobo oshushu